Maxaa looga hadlay shirka guddiga amniga ee gobolka Mudug?
By WARIYAHA GAALKACYO , GAROWE ONLINE
GAALKACYO, Puntland - Madaxweynaha dowlada Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo safar shaqo ku jooga Gaalkacyo, ayaa wuxuu maanta Shir-guddoomiyey Shirka Guddiga Amniga ee Gobolka Mudug.
Kulanka oo looga hadlay Amniga Gobolka Mudug iyo guud ahaan Puntland, waxaa Madaxweynaha kala qeybgalay Taliyeyaasha Guud ee Ciidamada Daraawiishta iyo Booliiska ee Dowladda Puntland, La taliyeyaasha Madaxweynaha ee dhinaca Amniga, xubno ka mid ah Golaha Wasiirada iyo Xildhabaano qeyb ka ah wafdiga Madaxweynaha ee Gaalkacyo ku sugan.
Dhanka kale, madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay kulan kula qaatay qasriga Madaxtooyada ee Gaalkacyo Dhalinyarada Gobolka Mudug.
Dhallinyarada ayaa Madaxweynaha uga warbixiyay xaaladda dhallinyarada ee Gobolka, caqabadaha, fursadaha iyo dhismaha garoonka kubadda cagta ee Gaalkacyo Cawaale Stadium.
Deni ayaa ka jawaabay codsiga dhallinyarada ee ku saabsan dhismaha garoonka Cawaale stadium, wuxuuna balan qaaday dhameystirka dhismaha garoonka kubadda cagta ee Cawaale Stadium.
Da'yarta ayaa uga mahadceliyey Madaxweyne Deni sida Dowladda iyo hoggaaminta dalka uu door muhim ah uga siiyey, sidoo kale waxay dhallinyaradu soo dhoweeyeen hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo iyaga u ah fursad wanaagsan.
Geesta kale, Siciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane, ayaa isla xalay kulan la qaatay waxgaradka iyo odeyaasha degmada Towfiiq ee Gobolka Mudug.
Waxgaradka degmada Towfiiq ayaa Madaxweynaha warbixin ka siiyey xaaladda guud ee deegaanka, sida dhinacyada Amniga, horumarka iyo Siyaasadda.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha Dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa kula dardaarmay Waxgaradka iyo Odeyaasha in ay ka shaqeynta midnimada, nabadgelyada iyo horumarka deegaanka.
Puntland 02.07.2020. 23:25
Deni ayaa gudoomiyey kulanka oo ku qabsoomay aalada maqalka iyo muuqaalka la isaga arko ee Zoom.
Madaxweyne Deni oo maamul cusub u magacaabey gobolka Mudug
Puntland 25.05.2019. 23:14
Dagaal ka qarxay bariga gobolka Mudug
Soomaliya 26.10.2017. 11:33
Madaxweynaha Puntland oo amar kasoo saarey dilka iyo kufsiga Caasha Ilyaas
Puntland 26.02.2019. 11:11
Puntland: Gaas oo u ambabaxay Garacad xilli Xiisad ay ka jirto
Puntland 31.07.2018. 12:28
Puntland oo ka hadashay maxaabiis lagala baxay maxkamad
Puntland 02.01.2020. 13:33